Ogaden News Agency (ONA) – Shacabka Katalonya Wuxuu u Codeeyay -Haa- Dawlad Xor ah.
Maqaal dheer oo meela badan taabanaya ayuu saxafi lagu magacaabo Dick Nichols ka diyaariyay afti laga qaaday dadweynaha gobolka Katalonya (Catalonia) 9kii bishan Nov. 2014. Wuxuu ku bilaabay maqaalka in 2milyan iyo 3exboqol oo kun (2.3 million) oo shacabka Katalonya ay dhagaha ka fureysteen go’aan maxkamadda dastuurka ee dalka Spain kasoo baxay oo joojinayay aftidaa inla qaado. Katalonya oo ka mid ah 17Gobol oo leh dawlad goboleed, ayaa baarlamaankooda go’aamiyay 26kii Sebtember in shacabka laga qaado aft la mid ah midii shacabka Skotland (Scotland) laga qaaday, taasoo ay dawladda Spain diiday iyadoo la kaashanaysa Maxkamadda Dastuuriga ee dalkaasi. Go’aankii maxkamadda ka dib, ayuu R/wasaaraha dawlad goboleedka Katalonya ku dhawaaqay in shacabka u dareeraan afti bisha 9keedii si caalamka u ogaado rabitaanka shacabkooda ee dawladda Spain ay is-hortaagtay.
Waxaa shacabka loosoo bandhigay labadii su’aal ee la weydiin lahaa hadii afti rasmi ah laga qaadayo. Waxayna kala ahaayeen;
1-Mawaxaad doonaysaa Kataloonya inay noqoto Dawlad (State)?
1- (1) Do you want Catalonia to become a state?
2-Haday tahay Haa, mawaxaad rabtaa dawlad Xor ah?
Natiijadii waxay noqotay 1.86milyan (80.76%) waxay u codeeyeen Xoriyadda, 232,000 (10.07) waxay u codeeyeen Dawlad aan xor ahayn, 105,000 (4.54) in xaaladda siday hadda tahay loo daayo.
Inkastoo ay Xukuumadda dhexe ee Spain aad u carqaladeysay inayna hirgalin aftidaa oo dadweyne badan aanay ka qayb galin, hadana waxaa muuqata inuu shacabka Katalonya si fiican oo ka badan intii la filayay uga qayb qaateen codaynta. Siduu ka warbixiyay wariyaha maqaalka, dad badan oo ka cadhooday madaxtaaga dawladda dhexe ee Madrid (caasimada Spain) ayaa aftida isugu soo baxay say u muuijyaan awoodooda shacbi. Safaf dhaadheer ayaa sunbaxnimo hore isa soo taagay, midkii diidanaa xoriyadda iyo midkii u codaynayay xoriyadda labadaba waxay doonayeen inay u muujiyaan dawladda dhexe inaysan soo faragalinin arimaha daakhiliga ee gobolkooda.
Waxay u ahayd buu yidhi qoraaga shacabka Katalonya maalin ilmo iyo farxad, wayna isu hambalyaynayeen. Dadka aadka uga dhex muuqday waxay ahaayeen buu yidhi odayaasha xasuustooda ay ku hjirto waagii ay Katalonya ahayd dawlad xor ah 1930meeyadii, kuwaasoo soo gaadhay waqtigii ugu xumaa ee gobolkan uusoo maray intii u dhexeysay 1935-1975. Xukunkii K/taliyihii Faranko ayaa shacabka Katalonya aad loo xasuuqay, barakicin xoog lehna lagu sameeyay shacabka Katalonya oo laga raray wadankooda.
Katalonya (Catalonia) waxay ka kooban tahay gobol, Barcelona oo ah magaalada labaad ee ugu weyn dalka Spain ayaa u ah magaala madax. Shacabka Katalonya oo inta ugu badan ka tirsan dalka Spain waa gobol qani ah oo warshada badan leh, isla markaana isku xidha dalal badan oo Yurub ah, waxaana ku nool shacab ka duwan dhaqan ahaan iyo afba shacabka Spanish-ka, waxaana soo dhex maray dagaalo badan oo taariikhi ah.
Waxaa muuqatay in shacabka Katalonya ay doonayaan inay soo ceshadaan madax-banaanidoodii oo aanay ka sii mid ahaanin dawladda Spain, taasoy doonayaan inay u maraan hab dastuuri ah, intii suurtagal ah.